Ninkii Kadambeeyay In Qadka Laga Joojiyo UK Oo Hargaysa Lagu Xiray +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ninkii Kadambeeyay In Qadka Laga Joojiyo UK Oo Hargaysa Lagu Xiray +Cod
Ciidamada Soomaailand ayaa maanta muddo kooban xiray Abuukar Cawaale oo ah halgamaa ka shaqeeya sidii dalka Soomaaliya looga joojin lahaa maandooriyaha qaat-ka oo dhibaato xoogan ku haya dhaqaalaha dalka iyo mushtaqbalka dhalinyarada.
Abuukar Cawaale wuxuuu kadib helay xoriyadii kadib markii ciidamadu ku waayeen wax dambi ah oo ku saabsan shaqada uu u tagay Hargeysa oo ahayd inuu bulshada reer Soomaaliland ka wacyi galiyo dhibaatada qaatka.
Abuukar Cawaale Oo Faah faahinaya siday wax ugu dhaceen ayaa yiri Waxaan aad iyo aad uga xumahay in saaka aniga oo hotel ka aan ka deganahay Hargeysa jooga ay ciidamada nabadsugida ‪Somaliland‬ I xiiran.
Waxaan ka mahad celinayaa sida professional ka ah ee qiimaha badan ee dowladnimado iyo kala danbayntu ka muuqato ee ay iila dhaqmeen.
3 Saacadood kadib markii la baaray eedeyntii la igu eedeeyey arin aanan rabin inaan halkaan kusheego waxaan dib u helay xornimadaydii Iyadoo la igu amray inaan si ugu dhaqsaha badan uga baxo Somaliland
Waxaan kaloo si weyn ugu mahadnaqayaa dhamaan taageerayaasha reer Somaliland ee ka xumadaay arintaan.
Waxaan kaloo shacabweynaha reer Somaliland ee kunool caasimada Hargeysa ka raali gelinyaa inuusan qabsoomi doonin kulankii loo balansanaa ee la igu marti qaaday ee looga hadlayey dhibaatada.